The kuenda ndiyo nyika kudenga, isu mumweya yedu zvinogona glimpsed kure.
Asi Jesu ndiye mutyairi mungarava, uye pasinei kuedza yakakwirira mafungu apo ndege chengarava vokudenga.
Vatendi kazhinji akafananidza vafambisi vaifamba mhiri kwegungwa upenyu, munzira kuenda chiteshi vokudenga.
Mungarava, pakanga aimbova vheya, wechikepe uyo aitarisa pamusoro pegungwa. Iye akagara mudengu pamusoro rechikepe, yakanyatsoiswa pamwe peya mabhainokura izvo aigona kuona kana chikepe akaenda kunyika. The mhute uye bvungapfunga aigona kazhinji zvakaoma kuona marongerwo enyika vakanga vakananga.
Isu vakagamuchira Jesu ari kuuya pamusoro pegungwa upenyu apo madutu kazhinji nehasha uye makungwa vari hasha. The kuenda ndiyo nyika kudenga, isu mumweya yedu zvinogona glimpsed kure. Asi Jesu ndiye mutyairi mungarava, uye pasinei kuedza yakakwirira mafungu apo ndege chengarava vokudenga.
The Bible rinotaura vanhu vaitarisira nyika iri nani kupfuura yepanyika. In Hebrews. 11: 13-14, 16, tinoverenga nezvazvo: Ndima 13:
"Ivava vose vakafa vasina kugamuchira zvakanga zvavimbiswa. Vakanga vachangobva kuriona kure, uye vakatenda mairi akakwazisa nayo uye vakazvimbundikira vakabvuma kuti vaeni nevapfuuri panyika. "
vanhu ava vaiva vechitendero vakaona Kuvira uchikwira - kure. Vakanga vaona nyika yokudenga iri kure, uye akareurura kuti yepanyika nyika haana yokumusha kwavo. Zvavanoda vaiva kudenga, iyo loomed kure. Asi nekuti vaigona kufa, havana kuenda nokushuva zvinangwa zvavo. Ndima 14:
"Kune avo vanoti izvi zvinoratidza kuti vari kutsvaka nyika."
Izvi zvinoreva kuti vaitsvaka zvakasiyana nyika, nyika iri nani kupfuura mumwe vakabva. Haikwanise kureva chero nyika kunze nyika yokudenga, vakanga vachitsvaka. Nokutaura kwake basa rake muupenyu vakanga varatidza kuti vaiva vatorwa munyika ino. Ndima 16:
"Asi zvino vanoshuva yakanaka kuipfuura, yokudenga mumwe. Naizvozvo Mwari haana nyadzi pamusoro pavo kuti anzi Mwari wavo, nokuti iye dzavagadzirira guta. "
Denga rakagadzirirwa vose vatsvene vaMwari vasati vapedzerana outorwa hwavo panyika. The Mwari vakasarudza kuda uye kushumira Mwari wavo.
Abraham akanga achimirira nyika iri nani,
"Nokuti iye achimirira guta rine nheyo, mhizha nemuvaki waro Mwari" (VaH. 11:10).
Mune imwe shanduro inoti:
"Nokuti akanga akamirira vachatarisira uye nechivimbo."
Abrahamu akafamba kuti zvinangwa ari kudenga uye nokusingaperi. Akararama upenyu hwake hwose ari duku yawo. Akanga akazvipira kuita izvozvo, sezvaakaita achimirira guta rine nheyo. Pfungwa yake raiva chinhu zvachose, kusiyana akararama kwaaigara mutende rake anongofamba upenyu,. Haana kutarisira guta yepanyika upi, asi umwe kuti Mwari akanga avaka. Nheyo dzenyika dzinotsauka uye asina chokwadi, asi guta Abrahamu akanga akamirira yakavakwa pamusoro penheyo zvikukutu, izvo zvinogona kumbozununguswa.
Kuguta, tiri munzira, tine vagari yedu kudenga. Tinotarisa nokushuva uye tarisiro nguva yedu Ambassador Vekudenga, Jesu achauya uye kutanha isu ikoko.